Kake Coconut Coconut Nooca Koofureed leh Frising Fresh Cream - Keega
Keeg qumbaha koonfureed oo lagu sameeyay qumbaha la kariyey iyo jiiska qaboojiyaha kareemka qumbaha!
Koonfurtaan keega qumbaha waxaa ka buuxa dhadhan qumbaha macaan mahadsanid qumbaha qumbaha , caano subag iyo wax soo saar ah. Waxay u egtahay si isku mid ah oo leh kareemka kareemka qumbaha!
Dhawaan waxaan safar ugu aaday magaalada Memphis, TN aniga iyo qaar ka mid ah qoraaladayda blogga ah ee aan ugu jeclahay iyada oo ujeedkeedu yahay nadiif in aan cuno jidkayaga magaalada. Maalin kasta waxaa loo qorsheeyay hareeraha meesha aan wax ka cuneyno.
Hadda, dabcan, waxaan ku lahaa qaybtayda qaar ka mid ah qaababka cajiibka ah ee Memphis BBQ oo ka socda Bartamaha BBQ. Qaar ka mid ah pickles la shiilay epic ka BB Kings, iyo digaag la shiilay ee ugu layaabka badan ee aan abid ka helay Gus's Chicken Caan ah ee Caanka ah.
Laakiin waxaa jirtay hal meel oo run ahaantii aniga ii taagnayd oo ay ahayd Commissary BBQ gudaha Germantown. Kani wuxuu ahaa waddo 20-daqiiqo fiican ka socota hawadeena BnB ee wadada weyn laakiin wiilku miyuu u qalantaa!
Meeshan ayaa loo yaqaan keeggeeda iyo keega si aan u samaynay wax macquul ah oo aan ku dalbannay mid kasta.
sida loo sameeyo keeg dhalasho qaanso roobaad
Si la yaab leh ayaan u jeclaaday keega qumbaha! Markii hore waxaan marwalba ku dari jiray keegga qumbaha ee leh subagga caadiga ah laakiin keeggan waxaa lagu daboolay qaboojiye kareem farmaajo iyo qumbaha ka badan banaanka.
Keegani wuxuu ahaa mid qoyan, ma ahan mid aad u macaan oo kaliya macaan! Dhammaanteen waxaan ku dagaallamaynay qaniinyadii ugu dambeysay!
Waxaa laygu waxyooday inaan waafajiyo qashinkeyga keega qumbaha duug ah kan si aan uhelo keegga qumbaha qumbaha ee koonfurta markasta oo aan rabo!
Ku billow inaad dubto mirahaaga qumbaha
Si aad u sameyso keegga qumbaha, ku bilow rootida qumbahaaga marka hore. Way fududahay in la gubo sidaa samee tan ka hor intaadan wax kale samayn!
Ku faafi jajabka qumbaha si siman xaashida dubista.
Waxaad ku karisaa 3 daqiiqo foornada 350ºF ka dibna walaaq. Cidhifyadu had iyo jeer dhakhso ayey u bunni yihiin!
1-2 daqiiqo oo kale waa inay sameeyaan. Ma jecli inaan ka dhigto midkeyga TOO bunni, kaliya ku filan in qumbaha kor loo jaro. Khudaarta qumbaha waxay soo saartaa dhadhanka qumbaha runtiina waxay leedahay af fiican waxayna ku dareysaa keeg qoto dheer qumbaha keega.
Sida loo sameeyo qumbaha keega qumbaha
Hadda waxaad sameyn kartaa dufankaaga keega. Hubso inaad tahay maaddooyin qabow (caano, subag, ukumo) dhammaantood loo jilicsan yahay qolka qolka ama xitaa in yar oo diiran si looga hortago in baydhku ka soo baxo.
Isku xoq burkaaga, budada dubista, soodhaha, iyo milixda oo dhinac dhigo.
Isku xoq subaga caanahaaga, qumbaha iyo soosaarida vanilj oo dhinac iska dhig
Kareem subagga jilicsan illaa inta uu siman yahay, ka dibna ku saydhaa sonkortaada ka dibna saliidda. Ku karbaasha dusha sare illaa iyo iftiin iyo qalafsanaan. Waa inay u muuqataa caddaan.
Ku dar jaallaha beedkaaga midba mar, adigoo mid kasta u oggolaanaya inuu si buuxda isugu dhafo ka hor intaadan ku darin tan xigta.
Ku dar 1/3 oo ah walxahaaga qalalan isku dar, ka dibna 1/2 cabitaannada ah, ka dib qalalan, ka dibna dareeraha, kuna dhammaanaya qaybtii ugu dambaysay ee qalalan. Isku qas kaliya illaa inta la isku darayo. Ha isku badin.
Sida loo laalaabo meringue digaaga keega
Ka dib marka baytarkaaga la sameeyo, waad karbaashi kartaa ukuntaada cad si ay u noqdaan kuwo adag laakiin qoyan. Meringue-kan ayaa ku dari doona xoogaa wiish dheeri ah iyo qalafsanaanta keegga qumbaha. Hubso inaadan karbaashin ukunta cad. Haddii ay u muuqdaan kuwo qallalan oo jajaban, meel fog ayaad ka tagtay.
Ku dar qiyaastii 1/3 oo cadaan ah baytarka oo si tartiib ah ugu laalaadi adoo ku wareejinaya spatula-kaaga hareeraha weelka banaankiisa, inta udhaxeysa baytariga iyo ukunta cad.
Dufanka keegga kor uga qaad xagga hoose oo isku laabi laftiisa. Sidan ayaad u laaban tahay .
U wareeji baaquli rubuc wareeg ah kadib laab kasta.
Ku dar inta ka hartay meeriskaaga oo sii wad laalaabka illaa inta la isku darayo. Ha isku badin.
Isku laabo qumbahaaga la shiilay oo u qaybi saddex ″ 8 digsi keega ah oo lagu diyaariyey keega goop ama sii daayo kale doorbidid digsi.
Haddaba keegaaga ku kari 350ºF ilaa 25-30 daqiiqo ama ilaa burushka ilkaha ay ka soo baxaan iyagoo nadiif ah. U daa qabooji ka hor dhaxan
Sida loo sameeyo keega lakabka qumbaha
Haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida loo sameeyo keeg lakab ah, waxaan aad ugu soo jeedinayaa fiidiyowgayga sida loo sameeyo keegaaga ugu horeeya .
Torte (jarjar nus dherer-caqli leh) haddii la doonayo.
Ku faafi qiyaastii 1/4 ″ dhaxan dusha lakabkaaga keega
Ku celi lakabyada haray.
Qabooji keega oo dhan oo leh lakab khafiif ah oo barafoobay oo barafee ama qabooji 15 daqiiqo.
Ku dhammee keega jaakad ugu dambaysa dhaxan. Waxaan u adeegsaday xaaqin kursi si aan dhinacyada uga dhigo mid toosan iyo qaaddo si aan ugu daro wareeg wanaagsan oo keega dushiisa ah.
Ku dabool dhinacyada keega qumbaha leh jajab qumbaha cusub (waxaan doorbiday inaan ku dubin banaanka keega).
Cunto karis wanaagsan oo loogu talagalay kookaha qumbaha?
Cuntadani waxay si fiican ugu shaqeysaa keega, wayna fududahay! Cuntadani waxay ka dhigaysaa qiyaastii 24 koob oo keeg ah. Dubo 350 darajo illaa 15-18 daqiiqo ilaa dhexda laga dhigo. Way fududaan kartaa in la gubo keega keega sababo laxiriira sonkorta sidaa darteed si dhaw ula soco. Haddii aad loo dubay waxay dhadhamin karaan qalalan.
Buuxinta ugu fiican keega qumbaha?
Waxa ugu fiican ee ku saabsan keega qumbaha ayaa ah inuu lammaaneeyo SO badan oo dhadhammo kala duwan ah. Buuxinta dhaqameed ee keega qumbaha waa wax khafiif ah oo kareem leh sida qaboojiyaha farmaajada qumbaha.
sida loo sameeyo macaro faransiis ah oo aan lahayn burka yicibta
Haddii aad dareento dhiirrigelin dheeraad ah waxaad ku buuxin kartaa keegga qumbaha qaar qumbaha qumbaha taas oo asal ahaan u eg weel, liin macaan ama xitaa r buuxinta budada .
Lakabyo qoyan oo keega qumbaha cusub oo laga buuxiyey qaboojiyaha farmaajada. Keegga qumbaha ayaa leh dhadhan qumbaha dhabta ah oo lagu dhisay keega oo leh jajab qumbaha qumbaha, caanaha qumbaha iyo taabashada soosaarida qumbaha. Waqtiga Diyaarinta:labaatan daqiiqado Waqtiga karinta:35 daqiiqado Wadarta Waqtiga:konton daqiiqado Kalori:545kcal
Recipe Cake Kake Coconut Cake oo ah kan ugu macaan uguna qalafsan ka Show Sugar Geek on Vimeo .
Waxyaabaha ay ka kooban Keega Qumbaha
▢kow iyo toban oz (312 g) Burka AP (ujeeddo dhan)
▢1 tsp (1 qaaddo shaaha) budada dubista
▢4 oz (114 g) subag aan cusbo lahayn heerkulka qolka
▢5 weyn (5 weyn) jaallo ah heerkulka qolka
▢5 weyn (5 weyn) ukun cad heerkulka qolka
▢1/4 tsp (1/4 qaaddo shaaha) kareem ah dhalada
▢1 tsp (1 tsp) soosaarida vanilj
▢laba tsp (laba qaaddo shaaha) soosaaray qumbaha
▢8 oz (227 g) caano subag heerkulka qolka
▢6 oz (170 g) qumbaha jilicsan ee macaan la dubay ilaa khafiif ah bunni
▢1 oz (28 g) qumbaha jilicsan ee macaan dubay (qurxin)
▢16 ounces (454 g) farmaajo jarjar xabadaha oo la jilciyey
▢8 ounces (227 g) subag aan cusbo lahayn jilcisay
▢1 qaaddo shaaha (1 qaaddo shaaha) soosaaray qumbaha
▢36 ounces (1020 g) sonkorta budada ah sifeeyey
▢Istaag mashiinka leh kuuskuusashada iyo weelka lifaaqa
Tilmaamaha Cake Coconut
Ku hagaaji raashinka foornada booska dhexe oo kuleyli 350ºF / 176ºC. Diyaarso seddex 8'x2 'oo keeg wareegsan leh keeg goos ah ama sii daayo digsi kale oo la doorbido.
Ku faafi jajafyada qumbahaaga si siman digsiga buskudka kuna dub ilaa 2-3 daqiiqadood ama ilaa ay KELIYA bilaabaan inay isku beddelaan bunni dhinacyada hareerahooda. Qumbaha isku walaaq oo dub ilaa 1-2 daqiiqadood ka badan illaa inta dahabi ah. Si dhaw ula soco hadii kale way gubi kartaa. Ka qaad foornada oo qabow.
Isku shiis burka, budada dubista, soodhaha iyo milixda baaquli dhexdhexaad ah. Dhinac iska dhig.
Ku dar saliida, qumbaha qumbaha iyo waxyaabaha laga soo saaro vanilj subagga caanahaaga
Ku rid ukunta cad baaquli isku qasan leh jeedalka ku lifaaqan. Karbaash on-sare. Ku dar kareemka dhalada. Karbaash illaa inta adag ee adag ka samaysmayo. Dhinac iska dhig
Kudar subag si aad ugu istaagto isku darka miisaska ku lifaaqan lifaaqa kuna garaac xawaare dhexdhexaad-sare ah illaa uu ka siman yahay oo dhalaalayo, illaa 30 ilbidhiqsi. Tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah u sonkorta, garaac ilaa inta isku dhafan ay tahay mid jilicsan oo ku dhow cad, qiyaastii 3-5 daqiiqo.
Ku dar jaallo ah, hal mar markiiba isku dar ah, si fiican u garaac mid kasta ka dib illaa inta la isku darayo.
Mashiinka ku samee xawaaraha ugu hooseeya, ku dar qiyaas ahaan seddex meelood meel ka mid ah maaddooyinka qallalan budada, isla markaaba waxaa ku xiga qiyaastii seddex meelood meel caanaha, isku dar ilaa maaddooyinka ay ku dhow yihiin in lagu daro qashinka. Ku celi hawsha 2 jeer oo dheeri ah. Markay baytarku u muuqdo inuu isku qasan yahay, jooji mashiinka oo ku xoq dhinacyada saxanka leh spatula caag ah.
Ku laabo beedkaaga cadhooday ee jilicsan iyo qumbaha qumbaha si tartiib ah u jilicsan.
U qaybi baytarka si siman inta u dhexeysa digsiyada la diyaariyey. Ku jilciso dusha sare leh spatula caag ah. Keega duba ilaa ay ku adkeystaan ​​bartamaha iyo cadayga oo soo baxa isagoo nadiif ah ama xoogaa jajab ah dul saaran yahay, qiyaastii 25-30 daqiiqo.
Ku wareeji digsiyada silig xarig ah oo qabooji 10 daqiiqo. Keegga u rogo santuuqa iskana tuur keegagga digsiyada. Si buuxda u qabooji dhaxanta ka hor.
Ku dar sonkorta budada ah ee la sifeeyay hal koob markiiba ilaa inta la isku darayo
Ku dar soosaarkaaga qumbaha iyo milixda, isku walaaq hoose illaa intaad ka jilicsaneyso
Ku xoq isku dar ah baaquli kuna xoq qumbaha iyo soosaarida vaniljiga. Jeeg isku dar. Ku dabool duubka balaastigga ah oo qaboojiyaha illaa qabow, ugu yaraan 2 saacadood.
MUHIIM: Hubi in dhammaan waxyaabaha aad ka kooban tahay ay ku jiraan hawo qolka oo aad isticmaaleyso cabir aad ku cabirto. Beddelashada maaddooyinka ayaa sababi kara in karintani ay fashilanto. (fiiri qoraalada qeybta hoose ee cuntada) Waxyaabaha Muhiimka ah ee ay Tahay inaad Ogaato Kahor Intaadan Bilaabin 1. U soo qaado dhammaan waxyaabaha aad ka kooban tahay heerkulka qolka ama xitaa xoogaa diiran (ukumo, caano subag, subag, iwm) si loo hubiyo in dubkaagu uusan jebin ama uusan curricamaynin. 2. U adeegso cabir si aad u miisaanka maaddooyinkaaga (oo ay ku jiraan dareerayaasha) haddii aan si kale loo faraynin (Qaadooyinka, qaadooyinka, qayilaada iwm). Qiyaasaha mitirka ayaa laga heli karaa kaarka cuntada. Maaddooyinka miisaanka ku jira ayaa aad uga saxsan isticmaalka koobabka waxayna kaa caawinayaan hubinta guusha cuntadaada. 3. Layliska Mise en Place (wax kasta oo meesha ku jira). Cabbiro maaddooyinkaaga ka hor wakhtiga oo diyaari iyaga ka hor inta aanad bilaabin isku-darka si loo yareeyo fursadaha si shil ahaan wax uga tagi kara. 4. Qabooji keegaaga ka hor dhaxan iyo buuxin. Waad ku daboolan kartaa keega barafoobay oo la qaboojiyey ee xiisaha leh haddii aad rabto. Keeggan sidoo kale waa u fiican yahay isku dhejinta. Had iyo jeer waxaan ku hayaa keegayaga in aan ku qaboojiyo qaboojiyaha ka hor intaan la keenin si loogu qaado gaadiid fudud. Wax badan ka baro qurxinta keeggaaga ugu horreeya. 5. Haddii cuntada lagu kariyo ay ku baaqeyso waxyaabo gaar ah sida burka keega, ku beddelashada dhammaan ujeeddada bur iyo galleyda laguma talinayo haddii aan lagu caddeyn karinta inay ok tahay. Beddelashada maaddooyinka ayaa sababi kara in karintani ay fashilanto. Daqiiqda Keeg waa daqiiq jilicsan, oo bur ah borotiin ka yar 9% ama ka yar.
U adeegida:1adeegaya|Kalori:545kcal(27%)|Kaarboohaydraytyada:56g(19%)|Protein:5g(10%)|Dufan:3. 4g(52%)|Dufan Dufan:24g(120%)|Kalastarol:135mg(Afar. Shan%)|Sodium:138mg(6%)|Kaliumperyamper:151mg(4%)|Fiber:labag(8%)|Sonkor:43g(48%)|Vitamin A:822IU(16%)|Vitamin C:1mg(1%)|Kaalshiyam:44mg(4%)|Bir:1mg(6%)
karinta keega arooska laga soo saaray sanduuqa isku qasan
sidee loo farsameeyaa keeg
karinta keega strawberry qoyan leh strawberries cusub